Jehova Ọ̀ Ga-ekwe Ka Nri Kọọ Onye Kraịst?
Ihe Devid kwuru n’Abụ Ọma 37:25 na ihe Jizọs kwuru na Matiu 6:33 ọ̀ pụtara na Jehova agaghị ekwe ka nri kọọ Onye Kraịst?
Devid kwuru, sị: “Ahụbeghị m ka a hapụrụ onye ọ bụla bụ́ onye ezi omume kpamkpam, ahụbeghịkwa m ụmụ ya ka ha na-arịọ nri.” O kwuru ihe a n’ihi ihe ndị o ji anya ya hụ. Ọ ma na Chineke na-elekọta ndị ya mgbe niile. (Ọma 37:25) Ma, ihe ahụ o kwuru apụtaghị na e nwetụbeghị ohu Jehova ihe kọrọ ma ọ bụkwanụ na e nweghị mgbe ihe ga-akọ ohu Jehova.
E nwere mgbe ụfọdụ ihe siiri Devid ezigbo ike. Otu n’ime ha bụ mgbe Sọl na-achụgharị ya. Nri Devid ji gwụrụ, ya agwa Ahimelek ka o nye ya achịcha ya na ndị so ya ga-ata. (1 Sam. 21:1-6) N’oge ahụ, Devid enweghị nri ọ ga-eri. Ma, ọ ma na Jehova ahapụbeghị ya. N’eziokwu, o nweghị ebe Baịbụl kwuru na Devid rịọrọ arịrịọ ka o nwee ike inweta ihe ọ ga-eri.
Na Matiu 6:33, Jizọs kwere ndị ji obi ha niile na-ejere Chineke ozi nkwa na ọ bụrụ na ha eburu ụzọ na-achọ Alaeze Chineke, Jehova ga-egboro ha mkpa ha. Ọ sịrị: “Ya mere, burunụ ụzọ na-achọ alaeze ahụ na ezi omume Chineke, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị ọzọ a niile [ya bụ, ma nri ma ihe ọṅụṅụ ma uwe].” Ma, Jizọs kwukwara ihe gosiri na agụụ nwere ike ịgụ “ụmụnna” ya n’ihi mkpagbu a ga-akpagbu ha. (Mat. 25:35, 37, 40) Ụdị ihe ahụ mere Pọl. Mgbe ụfọdụ, agụụ gụrụ ya, akpịrị akpọọkwa ya nkụ.—2 Kọr. 11:27.
Jehova gwara anyị na a ga-esi n’ụzọ dị iche iche kpagbuo anyị. O nwere ike ikwe ka ihe ụfọdụ kọọ anyị ka anyị na-agbalị ime ka o doo anya na ihe ahụ Ekwensu kwuru gbasara Chineke na ụmụ mmadụ bụ ụgha. (Job 2:3-5) Mgbe ụfọdụ, ụmụnna anyị na-ata ahụhụ n’ihi mkpagbu a na-akpagbu ha. Dị ka ihe atụ, chegodị banyere ụmụnna ndị ọchịchị Nazi tinyere n’ogige ịta ahụhụ. Otu ụzọ ha si rụsa ha arụrụala ka ha kwụsị irubere Chineke isi bụ na ha anaghị ekwe enye ha nri ga-ezuru ha. Ma, ụmụnna ndị ahụ rubeere Jehova isi, ọ hapụghịkwa ha. O kwere ka ọnwụnwa bịara ha, otú ahụ ọ na-ekwe ka ọnwụnwa dị iche iche bịara Ndị Kraịst niile taa. Ma, o doro anya na Jehova na-akwado ndị niile na-ata ahụhụ n’ihi aha ya. (1 Kọr. 10:13) Anyị kwesịrị icheta ihe e kwuru ná Ndị Filipaị 1:29. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụ unu ka e nyere ihe ùgwù ahụ n’ihi Kraịst, ọ bụghị naanị ka unu nwee okwukwe n’ebe ọ nọ, kama ka unu taakwa ahụhụ n’ihi ya.”
Jehova kwere nkwa na ya agaghị ahapụ ndị ohu ya. Dị ka ihe atụ, Aịzaya 54:17 kwuru, sị: “Ngwá ọgụ ọ bụla a ga-akpụ iji lụso gị ọgụ agaghị aga nke ọma.” Nkwa a na nkwa ndị yiri ya gosiri na Jehova agaghị ekwe ka e kpochapụ ndị ya. Ma, o nwere ike ikwe ka ọnwụnwa bịara Onye Kraịst, ma ọ bụdị kwe ka e gbuo ya.
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Septemba 2014
mailto:?body=Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Septemba 2014%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014685%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Septemba 2014
SEPTEMBA 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)
mailto:?body=SEPTEMBA 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw14%26issue%3D20140915%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=SEPTEMBA 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)